ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​ ဆက်သွယ်​ရေး​လမ်း​ကြောင့်​ ကရင်တချို့​ ​ပြောင်း​ရွှေ့​ခံရ – DVB
ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​ ဆက်သွယ်​ရေး​လမ်း​ကြောင့်​ ကရင်တချို့​ ​ပြောင်း​ရွှေ့​ခံရ
Published By နသှေငျ | 27 July, 2011
ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​နဲ့​ ဆက်သွယ်မယ့်​ အဓိက လမ်း​ကြောင်း​ဖောက်လုပ်ရာမှာ ကရင်ရွာတချို့​ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့​အတွက် ကရင်အမျိုး​သား​အစည်း​အရုံး​နှင့်​ ​ဆောက်လုပ်​ရေး​ကုမ္ပဏီတို့​ ​ဆွေး​နွေး​နေတယ်လို့​ သိရပါတယ်။ ကေအန်ယူရဲ့​ တွဲဖက်အ​ထွေ​ထွေအတွင်း​ရေး​မှူး​ ပဒို​စောလှ​ငွေက ​ဆွေး​နွေး​မှု​တွေနဲ့​ပတ်သက်လို့​ အ​သေး​စိတ် မ​ပြော​ပေမယ့်​ ညှိနှိုင်း​နေဆဲလို့​ အတည်ပြု ​ပြောပါတယ်။ “ပတ်ဝန်း​ကျင်ထိခိုက်မှု၊​ အ​ခြေခံလူထု ထိခိုက်မှု၊​ သစ်​တောဧရိယာ ထိခိုက်မှု ကိစ္စ​တွေ ကျ​နော်တို့​က survey လုပ်တဲ့​အခါမှာ ကျ​နော်တို့​ လိုချင်တဲ့​ survey ပုံစံနဲ့​ ​ဘောင်မဝင်တဲ့​အ​ပေါ်မှာ survey ပုံစံ ပီ​အောင် ကျ​နော်တို့​က ပြန်လည်ပြီး​တော့​ ညှိုနှိုင်း​ပြီး​တော့​ ​သေချာ survey ပြန်လုပ်ဖို့​အတွက် ပြန်လည်ပြီး​တော့​ ကျ​နော်တို့​က ​ဒေသခံမှာ ရှိတဲ့​ လုံခြုံ​ရေး​ကြီး​ကြပ်တဲ့​ တပ်​တွေနဲ့​ရော ဒီ​ဒေသခံ ထိစပ်တဲ့​ ပြည်သူ​တွေနဲ့​ရော၊​ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီဖက်စပ်​တွေကို ပြန်သုံး​သပ်စိစစ်ဖို့​အတွက် ကျ​နော်တို့​က ​ပြောကြဆိုကြပြီး​ ညှိနှိုင်း​ပြီး​တော့​ စိစစ်ပြီး​နေတဲ့​ ကာလပဲ။” အ​မေရိကန်​ဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံ ကုန်ကျမယ့်​ ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​ စီမံကိန်း​ကို အီတာလျှံ ထိုင်း​ကုမဏီ (Italian-Thai Development Company) က အဓိက အကုန်ကျခံတည်​ဆောက်မှာဖြစ်ပြီး​၊​ ပထမအရစ်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် က​နေ ၄ နှစ်အတွင်း​မှာ အပြီး​တည်​ဆောက်ဖို့​ စီစဉ်ထား​တာပါ။ မြန်မာဘက်အခြမ်း​ ​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​နဲ့​ စက်မှုဇုန်တည် ထား​ဝယ်နဲ့​ ထိုင်း​ဘက်က ကန်ချနဘူရီကို ဆက်သွယ်​ပေး​မယ့်​ လမ်း​ဟာ ၁၀၅ မိုင် ရှည်လျား​မယ်လို့​ သိရပါတယ်။ ထိုင်း​-မြန်မာနယ်စပ်မှာ အ​ခြေစိုက်တဲ့​ မြန်မာပြည်အတွက် တခြား​သော ဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​ အစီအစဉ်က (Another development for Burma) အဖွဲ့​ရဲ့​ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်​ရေး​မှူး​ ကိုဖရန်ကီက အဲဒီ​ဒေသထဲကို လွန်ခဲ့​တဲ့​ ၆ လကတည်း​က လမ်း​ဖောက်တဲ့​ စက်ယန္တရား​တွေ ဝင်​ရောက်လုပ်ကိုင်​နေပြီး​၊​ အနည်း​ဆုံး​ ရွာ​ပေါင်း​ ၂၅ မှ ရွာသား​ ​တွေကို ​နေရာ​ပြောင်း​ရွှေ့​ခိုင်း​တာ​တွေ၊​ ဥယျာဉ်ခြံ​တွေကို ဖျက်ဆီး​မှု​တွေ ရှိ​နေတယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။ “တနင်္သာရီရဲ့​ မြစ်ဖျား​ပိုင်း​မှာ ဗန်း​ချောင်း​ဆိုတာ ရှိ​တော့​ ဗန်း​ချောင်း​ တ​လျှောက်က ရွာ​တွေက ဒီလမ်း​ဖောက်ဖို့​မှာ ​တော်​တော်​လေး​ကို ခံရမှု​တွေ ရှိတယ်​လေ။ ဆို​တော့​ အရင်တုန်း​က ဗန်း​ချောင်း​ရဲ့​ အ​ရှေ့​ဘက်မှာလည်း​ ​ကျေး​ရွာ​တွေ အ​မြောက်အမြား​ရှိတယ်။ အနည်း​ဆုံး​ ၃၀-၄၀ ​လောက် ရွာ​တွေ ရှိတယ်။ သို့​သော်လည်း​ ဒီလမ်း​ဖောက်လုပ်မှုအတွက် လမ်း​ရဲ့​လုံခြုံ​ရေး​ကြောင့်​ ဒီ ဗန်း​ချောင်း​ရဲ့​ အ​ရှေ့​ဘက်က ရွာ​တွေက ဗန်း​ချောင်း​ရဲ့​ အ​နောက်ဘက်မှာ သွား​ပြီး​တော့​ စုထား​ခြင်း​ ခံရတယ်​လေ။ အဲဒီလိုမျိုး​ စုထား​ခြင်း​ခံရတဲ့​အတွက်​ကြောင့်​ မိမိရဲ့​ လယ်ယာကိုလည်း​ ပြန်သွား​လို့​မရဘူး​။ ​တောင်ယာကိုလည်း​ ပြန်သွား​မလုပ်ဘူး​။ ကွမ်း​သီး​ခြံ​တွေကိုလည်း​ ပြန်သွား​လို့​ မရ​တော့​ဘူး​။ ဆို​တော့​ အဲဒီမှာ လူစုလူ​ဝေး​တွေက ​တော်​တော်​လေး​ကို ဒုက္ခ​ရောက်​နေကြတယ်။ ​နောက်တချက်က အဲဒီ တ​လျှောက်မှာ ဖြတ်သွား​တဲ့​ ကွမ်း​သီး​ပင်​တွေကိုလည်း​ ဖြတ်သွား​ကြတယ်​လေ။ ဆို​တော့​ ဒီကွမ်း​ပင်​တွေက ဒီ​ဒေသမှာရှိတဲ့​ ဒီ ဌာ​နေတိုင်း​ရင်း​သား​တွေက နှစ်​ပေါင်း​များ​စွာ ​နေလာကြတာ။ ပြီး​တော့​ မျိုး​ဆက်​တွေ အဆက်​ပေါင်း​များ​စွာ ​နေလာကြတယ်​လေ။ သူတို့​ရဲ့​ ​ပြောပြချက်အရ သူတို့​ရဲ့​ ကွမ်း​ပင်က နှစ်​ပေါင်း​ ရာနဲ့​ချီပြီး​တော့​ ရှိခဲ့​ထား​တဲ့​ အရာ​တွေ။ ဆို​တော့​ အဲဒီအပင်​တွေက အခု​လော​လောဆယ်က အား​လုံး​ ဖျက်​ဖောက်ပြီး​တော့​ ရှင်း​လင်း​ခြင်း​ ခံရတယ်။” ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်​နေ့​ ရက်စွဲနဲ့​ Asia Times Online သတင်း​တပုဒ်မှာ​တော့​ ဘန်​ကောက်မှာရှိ အီတာလျှံ ထိုင်း​ကုမ္ပဏီရဲ့​ ​ပြောခွင့်​ရှိသူက ​လော​လောဆယ်မှာ စီမံကိန်း​ပတ်ဝန်း​ကျင်မှာ ကွင်း​ဆင်း​မှု​တွေ လုပ်​နေပြီး​၊​ ​လျော်​ကြေး​တွေ ​ပေး​သွား​ဖို့​ စီစဉ်ထား​တယ်လို့​ ​ပြောထား​ပါတယ်။ စီမံကိန်း​ကို​တော့​ စီစဉ်ထား​တဲ့​အတိုင်း​ လုပ်သွား​ဖို့​ ​မျှော်လင့်​ထား​တယ်လို့​လည်း​ ဆိုပါတယ်။ ကေအန်ယူရဲ့​ တွဲဖက်အ​ထွေ​ထွေအတွင်း​ရေး​မှူး​ ပဒို​စောလှ​ငွေက လမ်း​ဖောက်မယ့်​ ​ဒေသဟာ အစိုး​ရ တပ်​တွေ​ရော၊​ ​ကေအန်ယူတပ်​တွေ​ရော လှုပ်ရှား​မှု​တွေရှိ​နေတဲ့​ ပဋိပက္ခဇုန်ထဲမှာ ကျ​ရောက်တယ်လို့​ အခုလို ​ပြောပါတယ်။. “ဒီ​နေရာ​တွေကလည်း​ ရန်သူလှုပ်ရှား​မှု​နေရာ​တွေ ဆိုတဲ့​အခါကျ​တော့​ လမ်း​ဖောက်သည် ဖြစ်​စေ၊​ မ​ဖောက်သည်ဖြစ်​စေ အဲဒီမှာက ရန်သူလှုပ်ရှား​မှု ရှိလာရင် ကျ​နော်တို့​ လှုပ်ရှား​ရင်​တော့​ တိုက်ပွဲက ဖြစ်မှာပဲ။ အဲဒီ တိုက်ပွဲက လမ်း​ဖောက်တာ မ​ဖောက်တာနဲ့​ မပတ်သက်ဘူး​လေ။ လမ်း​က​တော့​ ​နောက်မှ လာတဲ့​ကိစ္စပဲ ဒီ​နေရာ​တွေက ပဋိပက္ခဇုန်​တွေလို့​ သူတို့​ကို ​ပြောထား​တာပဲ​လေ နဂိုကတည်း​ကိုကလည်း​။ ပဋိပက္ခဇုန်ဖြစ်တဲ့​အတွက်​ကြောင့်​ သူတို့​ ​ပြောထား​တဲ့​ အ​ပေါ်မှာ survey ကိုလုပ် survey လုပ်တဲ့​အခါမှာ ဒီ ပဋိပက္ခဇုန်အတွင်း​မှာ ကျ​ရောက်မယ့်​ လုံခြုံမှုကိစ္စ​တွေ အဲဒီလို ထိခိုက်လာမယ် ဆိုလို့​ရှိရင် လမ်း​ကို ​ကွေ့​တန်​ကွေ့​ ​ဖောက်တန်​ဖောက်ဖို့​ ဆိုပြီး​ တိုင်ပင်​ဆွေး​နွေး​ဖို့​ လုပ်ဖို့​ ရှိတဲ့​ဟာကို သူတို့​က survey ကလည်း​ survey မကျ။ အပြီး​ဖောက်တာ မကျဘူး​ ဆိုတဲ့​အခါကျ​တော့​ အဲဒီလို ထိခိုက်မှု​တွေ တချို့​နေရာ​တွေမှာ အကုန်လုံး​မဟုတ်ပါဘူး​ တချို့​အပိုင်း​တွေမှာ အဲဒီလို ဖြစ်​ပေါ်​နေတဲ့​ အ​ပေါ်​တွေမှာ ဒါက ပြန်လည်ပြီး​တော့​ သုံး​သပ်ဖို့​အတွက် သူတို့​ကို ရပ်ထား​ခိုင်း​တယ်​ပေါ့​။” Another development for Burma အဖွဲ့​က ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်​ရေး​မှူး​ ကိုဖရန်ကီ ကုမ္ပဏီအ​နေနဲ့​ သဘာဝ ပတ်ဝန်း​ကျင်နဲ့​ လူမှုဘဝ​တွေကို ထိခိုက်နိုင်တာ​တွေကို တာဝန်ယူ​စေချင်တယ်လို့​ အခုလို ​ပြောပါတယ်။ “ကျ​နော်တို့​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် လှုပ်ရှား​မှု လုပ်​နေတဲ့​ လူ​တွေ​သော်လည်း​ကောင်း​၊​ လူမှု​ရေး​လှုပ်ရှား​မှု လုပ်​နေတဲ့​ သူ​တွေ​သော်လည်း​ကောင်း​ ဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​အတွက် အမည်ခံပြီး​တော့​ လုပ်တဲ့​ အလုပ်ကို ကျ​နော်တို့​ တား​ဆီး​တာ​တော့​ မဟုတ်ဘူး​ ပိတ်ပင်တာ​တော့​ မဟုတ်ဘူး​ပေါ့​လေ။ သို့​သော်လည်း​ ဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​ကို လုပ်မယ့်​ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီ​တွေက နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီ​တွေရဲ့​ ကျင့်​ဝတ်​တွေကို လိုက်နာဖို့​ သင့်​တယ်။ လိုက်ပြီး​တော့​ ထိန်း​သိမ်း​ဖို့​ သင့်​တယ်ဆိုတာကိုပဲ ကျ​နော်တို့​အ​နေနဲ့​ တွန်း​ချင်တယ်​လေ။ သူတို့​ရဲ့​ လူမှု​ရေး​တာဝန်ခံမှုဆိုတာ ရှိမယ်၊​ သူတို့​ လုပ်လိုက်တဲ့​ လုပ်ငန်း​က လူမှု​ရေး​ကို ဘယ်လို​ပြောင်း​လဲမှုရှိမလဲ။ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ကို ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ အဲဒါကိစ္စ​တွေနဲ့​ ပတ်သက်တာကို သူတို့​မှာ တာဝန်ယူဖို့​ ရှိတယ်။ ပြီး​တော့​ နိုင်ငံတကာရဲ့​ အဆင့်​နဲ့​လည်း​ လိုက်နာဖို့​ လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်း​ ကျ​နော်တို့​ တိုက်တွန်း​ချင်တယ်​လေ။” ဒီတပတ်အ​စောပိုင်း​ မြန်မာနိုင်ငံသဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ဆိုင်ရာ အလုပ်အဖွဲ့​ (BEWG) ရဲ့​ အစီရင်ခံစာသစ်မှာ တိုင်း​ရင်း​သား​ဒေသ​တွေမှာ ဖြစ်ပွား​နေတဲ့​ ပဋိပက္ခ​တွေရဲ့​ အဓိကအ​ကြောင်း​အရင်ဟာ သယံဇာ​တွေကို အစိုး​ရက ထိန်း​ချုပ်ထုတ်ယူတာ​ကြောင့်​လို့​ ​ထောက်ပြခဲ့​ပြီး​ ဒီလို ပဋိပက္ခ​တွေဟာ ​ဒေသခံ​တွေနဲ့​ အဲဒီ​ဒေသမှာ ရင်း​နှီး​မြှုပ်နှံသူ​တွေကို ခြိမ်း​ခြောက်နိုင်တာကို ​ထောက်ပြထား​ပါတယ်။ ၁၀ နှစ်စီမံကိန်း​ဖြစ်တဲ့​ ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​နဲ့​ အကြီး​စား​ စက်မှုဇုန်စီမံကိန်း​တွေထဲမှာ ​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​ ၂ ခု အပြင်၊​ သ​င်္ဘောကျင်း​၊​ သံမဏိစက်ရုံ၊​ ဓာတ်​မြေဩဇာစက်ရုံ၊​ ​ကျောက်မီး​သွေး​စက်ရုံ၊​ ​ရေနံနှင့်​ ​ရေနံချက် စက်ရုံ၊​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​ သန့်​စင်စက်ရုံတို့​ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး​၊​ ​လေထု၊​ ​ရေထုနဲ့​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် ထိခိုက်မှု​တွေအပြင်၊​ ကျန်း​မာ​ရေး​နဲ့​ လူမှုဘဝ​တွေကို ဆိုး​ကျိုး​တွေ သက်​ရောက်နိုင်တယ်လို့​ ​ဝေဖန်သူ​တွေက ဆိုကြပါတယ်။
ထားဝယ်ရေနက္ဆိပ္ကမ်း ဆက်သယ်ြရေးလမ်းကြောင့် ကရင္တခ်ို့ျေပာင်းရွှေ့ခံရ
နေသငြ်၊ ၂၇၊ ၀၇၊ ၂၀၁၁
ထားဝယ်ရေနက္ဆိပ္ကမ်းနဲ့ ဆက်သယ္မြယ့် အဓိက လမ်းကြောင်းဖောက္လုပ်ရာမွာ ကရင်ရြာတခ်ို့ကို ထိခိုက်နိုင္တဲ့အတကြ် ကရင်အမ်ိုးသားအစည်းအရုံးနွင့် ဆောက္လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတို့ ဆြေးနြေးနေတယ္လို့ သိရပါတယ်။
ကေအန်ယူရဲ့ တြဲဖက်အထေထြေအြတငြ်းရေးမွူး ပဒိုစောလွငေကြ ဆြေးနြေးမှုတေနြဲ့ပတ်သက္လို့ အသေးစိတ် မျေပာပေမယ့် ညှိနှိုင်းနေဆဲလို့ အတည်ျပုျေပာပါတယ်။
“ပတ်ဝန်းက်င္ထိခိုက္မှု၊ အျေခခံလူထု ထိခိုက္မှု၊ သစ်တောဧရိယာ ထိခိုက္မှု ကိစ္စတြေ က်န္တောို့က survey လုပ္တဲ့အခါမွာ က်န္တောို့ လိုခ်င္တဲ့ survey ပုံစံနဲ့ ဘောင္မဝင္တဲ့အပေါ်မွာ survey ပုံစံ ပီအောင် က်န္တောို့ကျပန္လည်ပြီးတော့ ညှိုနှိုင်းပြီးတော့ သေခ်ာ surveyျပန္လုပ္ဖို့အတကြ်ျပန္လည်ပြီးတော့ က်န္တောို့က ဒေသခံမွာ ရွိတဲ့ လျုံခုံရေးကြီးကြပ္တဲ့ တပ်တေနြဲ့ရော ဒီဒေသခံ ထိစပ္တျဲ့ပည်သူတေနြဲ့ရော၊ သက္ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီဖက္စပ်တေကျြိုပန်သုံးသပ္စိစစ္ဖို့အတကြ် က်န္တောို့ကျေပာကြဆိုကြပြီး ညှိနှိုင်းပြီးတော့ စိစစ်ပြီးနေတဲ့ ကာလပဲ။”
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈ ဘီလီယံ ကုန္က်မယ့် ထားဝယ်ရေနက္ဆိပ္ကမ်း စီမံကိန်းကို အီတာလွ်ံ ထိုင်းကုမဏီ (Italian-Thai Development Company) က အဓိက အကုန္က်ခံတည်ဆောက္မျွာဖစ်ပြီး၊ ပထမအရစ္ကို ၂၀၁၂ ခုနွစ် ကနေ ၄ နွစ်အတငြ်းမွာ အပြီးတည်ဆောက္ဖို့ စီစဥ္ထားတာပါ။
ျမန္မာဘက်အျခမ်း ရေနက္ဆိပ္ကမ်းနဲ့ စက္မှုဇုန္တည် ထားဝယ္နဲ့ ထိုင်းဘက္က ကန္ခ်နဘူရီကို ဆက်သယ်ြပေးမယ့် လမ်းဟာ ၁၀၅ မိုင် ရွည္လ်ားမယ္လို့ သိရပါတယ်။
ထိုင်း-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ အျေခစိုက္တျဲ့မန္မျာပည်အတကြ် တျခားသော ဖြံ့ဖြိုးရေး အစီအစဥ္က (Another development for Burma) အဖြဲ့ရဲ့ ဆက်သယ်ြညှိနှိုင်ရေးမွူး ကိုဖရန္ကီက အဲဒီဒေသထဲကို လန္ခြဲ့တဲ့ ၆ လကတည်းက လမ်းဖောက္တဲ့ စက်ယန္တရားတြေ ၀င်ရောက္လုပ္ကိုင်နေပြီး၊ အနည်းဆုံး ရြာပေါင်း ၂၅ မွ ရြာသား တေကြို နေရျာေပာင်းရွှေ့ခိုင်းတာတြေ၊ ဥယ်ာဉ်ျခံတေကြို ဖ်က္ဆီးမှုတြေ ရွိနေတယ္လို့ျေပာပါတယ်။
“တနင်္သာရီရျဲ့မစ္ဖ်ားပိုင်းမွာ ဗန်းခေ်ာင်းဆိုတာ ရွိတော့ ဗန်းခေ်ာင်း တလွေ်ာက္က ရြာတေကြ ဒီလမ်းဖောက္ဖို့မွာ တော်တော်လေးကို ခံရမှုတြေ ရွိတယ်လေ။ ဆိုတော့ အရင္တုန်းက ဗန်းခေ်ာင်းရဲ့ အရွေ့ဘက္မွာလည်း ကေ်းရြာတြေ အျေမာက်အျမားရွိတယ်။ အနည်းဆုံး ၃၀-၄၀ လောက် ရြာတြေ ရွိတယ်။ သို့သ္လောည်း ဒီလမ်းဖောက္လုပ္မှုအတကြ် လမ်းရဲ့လုံခြုံရေးကြောင့် ဒီ ဗန်းခေ်ာင်းရဲ့ အရွေ့ဘက္က ရြာတေကြ ဗန်းခေ်ာင်းရဲ့ အနောက္ဘက္မွာ သြားပြီးတော့ စုထာျးခင်း ခံရတယ်လေ။ အဲဒီလိုမ်ိုး စုထာျးခင်းခံရတဲ့အတက်ြကြောင့် မိမိရဲ့ လယ်ယာကိုလည်ျးပန်သြားလို့မရဘူး။ တောင်ယာကိုလည်ျးပန်သြားမလုပ္ဘူး။ ကမြ်းသီျးခံတေကြိုလည်ျးပန်သြားလို့ မရတော့ဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒီမွာ လူစုလူဝေးတေကြ တော်တော်လေးကို ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။ နောက္တခ်က္က အဲဒီ တလွေ်ာက္မျွာဖတ်သြားတဲ့ ကမြ်းသီးပင်တေကြိုလည်ျးဖတ်သြားကြတယ်လေ။ ဆိုတော့ ဒီကမြ်းပင်တေကြ ဒီဒေသမွာရွိတဲ့ ဒီ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတေကြ နွစ်ပေါင်းမ်ားစြာ နေလာကြတာ။ ပြီးတော့ မ်ိုးဆက်တြေ အဆက်ပေါင်းမ်ားစြာ နေလာကြတယ်လေ။ သူတို့ရဲ့ျေပျာပခ်က်အရ သူတို့ရဲ့ ကမြ်းပင္က နွစ်ပေါင်း ရာနဲ့ခ်ီပြီးတော့ ရွိခဲ့ထားတဲ့ အရာတြေ။ ဆိုတော့ အဲဒီအပင်တေကြ အခုလောလောဆယ္က အားလုံး ဖ်က်ဖောက်ပြီးတော့ ရွင်းလင်ျးခင်း ခံရတယ်။”
ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက်နေ့ ရက္စြဲနဲ့ Asia Times Online သတင်းတပုဒ္မွာတော့ ဘန်ကောက္မွာရွိ အီတာလွ်ံ ထိုင်းကုမ္ပဏီရဲ့ျေပာခငြ့်ရွိသူက လောလောဆယ္မွာ စီမံကိန်းပတ်ဝန်းက်င္မွာ ကငြ်းဆင်းမှုတြေ လုပ်နေပြီး၊ လေ်ာ်ကြေးတြေ ပေးသြားဖို့ စီစဥ္ထားတယ္လို့ျေပာထားပါတယ်။
စီမံကိန်းကိုတော့ စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင်း လုပ်သြားဖို့ မွေ်္လာင့်ထားတယ္လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ကေအန်ယူရဲ့ တြဲဖက်အထေထြေအြတငြ်းရေးမွူး ပဒိုစောလွငေကြ လမ်းဖောက္မယ့် ဒေသဟာ အစိုးရ တပ်တေရြော၊ ကေအန်ယူတပ်တေရြော လှုပ်ရွားမှုတေရြွိနေတဲ့ ပဋိပက္ခဇုန္ထဲမွာ က်ရောက္တယ္လို့ အခုလိုျေပာပါတယ်။.
“ဒီနေရာတေကြလည်း ရန်သူလှုပ်ရွားမှုနေရာတြေ ဆိုတဲ့အခါက်တော့ လမ်းဖောက်သည်ျဖစ်စေ၊ မဖောက်သည်ျဖစ်စေ အဲဒီမွာက ရန်သူလှုပ်ရွားမှု ရွိလာရင် က်န္တောို့ လှုပ်ရွားရင်တော့ တိုက္ပြဲကျဖစ္မွာပဲ။ အဲဒီ တိုက္ပြဲက လမ်းဖောက္တာ မဖောက္တာနဲ့ မပတ်သက္ဘူးလေ။ လမ်းကတော့ နောက္မွ လာတဲ့ကိစ္စပဲ ဒီနေရာတေကြ ပဋိပက္ခဇုန်တေလြို့ သူတို့ကိုျေပာထားတာပဲလေ နဂိုကတည်းကိုကလည်း။ ပဋိပက္ခဇုန်ျဖစ္တဲ့အတက်ြကြောင့် သူတို့ျေပာထားတဲ့ အပေါ်မွာ survey ကိုလုပ် survey လုပ္တဲ့အခါမွာ ဒီ ပဋိပက္ခဇုန်အတငြ်းမွာ က်ရောက္မယ့် လုံခြုံမှုကိစ္စတြေ အဲဒီလို ထိခိုက္လာမယ် ဆိုလို့ရွိရင် လမ်းကို ကြေ့တန်ကြေ့ ဖောက္တန်ဖောက္ဖို့ ဆိုပြီး တိုင္ပင်ဆြေးနြေးဖို့ လုပ္ဖို့ ရွိတဲ့ဟာကို သူတို့က survey ကလည်း survey မက်။ အပြီးဖောက္တာ မက်ဘူး ဆိုတဲ့အခါက်တော့ အဲဒီလို ထိခိုက္မှုတြေ တခ်ို့နေရာတေမြွာ အကုန္လုံးမဟုတ္ပါဘူး တခ်ို့အပိုင်းတေမြွာ အဲဒီလျိုဖစ်ပေါ်နေတဲ့ အပေါ်တေမြွာ ဒါကျပန္လည်ပြီးတော့ သုံးသပ္ဖို့အတကြ် သူတို့ကို ရပ္ထားခိုင်းတယ်ပေါ့။”
Another development for Burma အဖြဲ့က ဆက်သယ်ြညွိနွိုင်ရေးမွူး ကိုဖရန္ကီ ကုမဏီအနေနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းက်င္နဲ့ လူမှုဘ၀တေကြို ထိခိုက်နိုင္တာတေကြို တာဝန်ယူစေခ်င္တယ္လို့ အခုလိုျေပာပါတယ်။
“က်န္တောို့ သဘာဝပတ်ဝန်းက်င် လှုပ်ရွားမှု လုပ်နေတဲ့ လူတေသြေ္လာည်းကောင်း၊ လူမှုရေးလှုပ်ရွားမှု လုပ်နေတဲ့ သူတေသြေ္လာည်းကောင်း ဖြံ့ဖြိုးရေးအတကြ် အမည္ခံပြီးတော့ လုပ္တဲ့ အလုပ္ကို က်န္တောို့ တားဆီးတာတော့ မဟုတ္ဘူး ပိတ္ပင္တာတော့ မဟုတ္ဘူးပေါ့လေ။ သို့သ္လောည်း ဖြံ့ဖြိုးရေးကို လုပ္မယ့် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီတေကြ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီတေရြဲ့ က်င့်ဝတ်တေကြို လိုက္နာဖို့ သင့်တယ်။ လိုက်ပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းဖို့ သင့်တယ္ဆိုတာကိုပဲ က်န္တောို့အနေနဲ့ တနြ်းခ်င္တယ်လေ။ သူတို့ရဲ့ လူမှုရေးတာဝန္ခံမှုဆိုတာ ရွိမယ်၊ သူတုိ့ လုပ္လိုက္တဲ့ လုပ်ငန်းက လူမှုရေးကို ဘယ္လိျုေပာင်းလဲမှုရွိမလဲ။ သဘာဝပတ်ဝန်းက်င္ကို ဘယ္လျိုဖစ္မလဲ အဲဒါကိစ္စတေနြဲ့ ပတ်သက္တာကို သူတို့မွာ တာဝန်ယူဖို့ ရွိတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အဆင့်နဲ့လည်း လိုက္နာဖို့ လိုအပ္တယ္ဆိုတာလည်း က်န္တောို့ တိုက္တနြ်းခ်င္တယ်လေ။”
ဒီတပတ်အစောပိုင်ျးမန္မာနိုင်ငံသဘာဝပတ်ဝန်းက်င္ဆိုင်ရာ အလုပ်အဖြဲ့ (BEWG) ရဲ့ အစီရင္ခံစာသစ္မွာ တိုင်းရင်းသားဒေသတေမြျွာဖစ္ပြားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတေရြဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်ဟာ သယံဇာတေကြို အစိုးရက ထိန်းခ်ုပ္ထုတ်ယူတာကြောင့်လို့ ထောက်ျပခဲ့ပြီး ဒီလို ပဋိပက္ခတေဟြာ ဒေသခံတေနြဲ့ အဲဒီဒေသမွာ ရင်းနွီျးမှုပ်နွံသူတေကျြိုခိမ်ျးေခာက်နိုင္တာကို ထောက်ျပထားပါတယ်။
၁၀ နွစ္စီမံကိန်ျးဖစ္တဲ့ ထားဝယ်ရေနက္ဆိပ္ကမ်းနဲ့ အကြီးစား စက္မွုဇုန္စီမံကိန်းတေထြဲမွာ ရေနက္ဆိပ္ကမ်း ၂ ခု အျပင်၊ သင်္ဘောက်င်း၊ သံမဏိစက်ရုံ၊ ဓာတ်ျေမသြဇာစက်ရုံ၊ ကေ်ာက္မီးသြေးစက်ရုံ၊ ရေနံနွင့် ရေနံခ်က် စက်ရုံ၊ သဘာဝဓာတ်ငြေ့ သန့်စင္စက်ရုံတို့ ပါဝင္မျွာဖစ်ပြီး၊ လေထု၊ ရေထုနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းက်င် ထိခိုက္မှုတေအျြပင်၊ က်န်းမာရေးနဲ့ လူမှုဘ၀တေကြို ဆိုးက်ိုးတြေ သက်ရောက်နိုင္တယ္လို့ ဝေဖန်သူတေကြ ဆိုကြပါတယ်။
ဆိပျဖွူ သဈတောဝနျထမျး ၂ ဦး CDM ပွုလုပျပွီး တျောလှနျရေးတပျဖှဲ့နှငျ့ ပူးပေါငျး